Vaovao - Serivisy namboarina, traikefa matihanina sy manan-karena
Vao tsy ela akory izay, Wuxi Innovate Machining Development Co., Ltd. Vita ny famokarana ny tsipika famokarana gel sy emulsion ho an'ny Yangzhou Runlian Medical Equipment Co., Ltd. ary ny tsipika famokarana fanosotra sy fanosotra ho an'ny Hunan Zhongxinkang Medical Equipment Co., Ltd. rehetra ny tsipika prodction dia efa nofoanana avokoa. Natolotra ara-dalàna tamin'ny mpanjifa izany tamin'ny volana oktobra, ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny famokarana ilay mpampiasa.
Ny fiasa mahazatra an'ireo singa roa ireo dia ny fahafaha-manao lehibe, ny karazany ary ny toerana kely. Araka ny toe-javatra misy ny mpampiasa, ny injenieranay dia namolavola drafitra iray feno avy amin'ny fandinihana ankapobeny ny asa, ny vidiny, ny fisehosehoana, ny asany, ny fitaterana ary ny fidirana. Tsotra sy malama ny fizotran'ny fandidiana iray manontolo, ary vokatra marobe no azo vokarina amin'ny emulsifier miasa am-piasana maro hamokarana vokatra vita avo lenta, izay mamaha ny olan'ny mpanjifa ary mahafeno tanteraka ny filan'ny mpanjifa. Ny mpampiasa dia feno dera ho an'ny orinasanay.
Ary tamin'ity taona ity, noho ny valanaretina, nihena ny fangatahana amin'ny tsena ivelany, saingy mbola nahazo baiko avy amin'ny mpanjifa izahay raha ny valanaretina no ratsy indrindra. Ny baiko Bangladesh dia vita tamin'ny 8 Oktobra. Ity mpanjifa any Bangladesh ity dia mpanamboatra fandokoana volo. Aorian'ny fandroahana dia mila refesina ny atin'ny ôksizena ao anaty vilany. Ny nitroka dia mila fenoina mandritra ny fizotry ny famokarana. Ilaina ny fitaovana fanadiovana azota. Ireo injenieranay dia mamolavola ny masinina araka ny mpanjifa's mila sy manafoana ny filàna fanadiovana azota. Nomena azy ireo koa ny horonan-tsary momba ny fametrahana an-tsipiriany sy ny fanohanana ny teknolojia. Ny mpanjifa dia tena afa-po amin'ny milina sy serivisinay ary nahatratra fiaraha-miasa maharitra.
Wuxi Innovate Machinery Development Co., Ltd. dia nifantoka tamin'ny fitaovana indostrialy nandritra ny folo taona mahery. Izy io dia nanangona traikefa manan-karena amin'ny famokarana crème, lotion ary fitaovana fanosotra. Ny teknolojia matotra sy feno. Ny endrika tsirairay dia azo natao ho an'ny mpampiasa. Manome fitaovana avo lenta ny mpanjifa mandritra ny famolavolana vahaolana azo tsapain-tanana ho an'ny mpanjifa hitsitsy vola sy hanatsara ny fahombiazany.